हे भगवान् ! टिकटकमा निकै नै भाइरल बालकलाई के भयो यस्तो; हेर्नुस् उनका रमाइला टिकटक भिडियो – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/हे भगवान् ! टिकटकमा निकै नै भाइरल बालकलाई के भयो यस्तो; हेर्नुस् उनका रमाइला टिकटक भिडियो
उनका भिडियोहरु टिकटकमा लाखौंले हेरिसकेका छ्न । त्यतिकै उनलाई लाइक गर्ने पनि लाखौं नै रहेका छ्न । त्यस्तै उनलाई आशीर्वाद दिने मानिसहरूको पनि कमि छैन । उनको घरमा बुबा, ममी र बहिनी रहेका छन । उनलाई धेरै मानिसहरुले निकै नै मन परएका छन । अब बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोला: भिडियो हेर्न तल क्लिल गर्नुहोला : धार्मिक मान्यता अनुसार भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो नागदेवताको अण्डा ॐ लेखी सेयर गरेमा मनोकामना पुरा हुने विश्वास , मानव सभ्यताको शिशु बिहानीमा आदिम मानवको आद्य चेतनाले प्रकृतिको विनासकारी र कल्याणकारी रुपलाई अदृष्य शक्तिद्धारा सञ्चालित भएको ठान्यो ।
अदृष्य शक्तिप्रतिको डर अनि त्रासको साथसाथै आस्था र समर्पणको आधारमा प्रकृतिलाई दैवीकरण गर्यो । प्रकृतिका विविधरुपलाई फरक फरक शक्तिद्धारा सञ्चालित भएको विश्वासमा वहुदेववादको कल्पना गरियो । विश्वको हरेक सभ्यतामा विकसित धर्म र संस्कृतिले प्रकृतिपूजालाई अपनाएको पाईन्छ ।
सिधा भाषामा भन्नु पर्दा नाग भनेको सर्प हो र सर्पले प्रकृतिमा भएको विषाक्त तत्वहरुलाई आफूमा ग्रहण गरेर प्राकृतिक सन्तुलनलाई कायम राख्दछ ।
हिन्दूहरुले अमृत समान दुध दिने गाईलाई जसरी आमा समान मानेर पूजा गर्छन, त्यसरी नै विष ओकल्ने सर्पको पूज गर्ने जाती त हिन्दूधर्मी आर्यहरु नै हुन् । आज पनि भारत तथा नेपालमा आफूलाई नाग जातीका सन्तान मान्ने जातीहरु पनि रहेका छन् ।